साताको सेयर बजार : २६ अर्ब बढीको कारोबार
धितोपत्र बजारमा यस साता सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उतारचढावपूर्ण अवस्थामा रह्यो। सातामा पाँच दिन सेयर
काठमाडौं । कारोबारको चार दिन निरन्तर उकालो लागेको साताको सेयर बजार अन्तिम कारोबार दिन भने केही घटेको छ । बिहीबारसूचक केही दबाबमा परेर सेयर बजारमा करेक्सन आएको थियो । अघिल्लो साताको तुलनामा यो साता कारोबार रकम बढेको छ । सेयर बजारमा यसअघि लगभग २२ प्रतिशतको करेक्सन आइसकेको छ । साताको अन्तिम दिन बिहीबार कारोबार बन्द […] The post यस्तो रह्यो साताको सेयर बजार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
राजधानी दैनिक 16 दिन पहिले
साताको सेयर बजार – ४८ अङ्क बढ्यो, कारोबार रकम घट्यो
यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ४७ अङ्कले बढेर बन्द भएको छ । गत साताको बिहीबार नेप्से परिसूचक २६ सय ३३ अङ्कमा बन्द भएको थियो । यो साता ४८ अङ्कले बढेर २६ सय ८१ अङ्क पुगेको हो ।चार कारोबार दिनमध्ये दुई दिन गिरावट र दुई दिन वृद्धि आएसँगै साताभरमा नेप्से सूचक २ प्रतिशतले माथि चढेको छ । यस क्रममा सेन्सेटिभ इन्डेक्समा १.५५ प्रतिशतको वृद्धि आएको छ । यद्यपि, परिसूचक बढे पनि यो साता कारोबार रकम भने घटेको छ ।गत साता नेप्सेमा २६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । यो साता भने कारोबार रकम घटेर
यो साता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा ७.२७ अंकको सुधार आएको छ । साताको चार दिन कारोबार भएको नेप्सेमा सामान्य सुधार आउँदै समग्र परिसूचक २८ सय १९ अंकमा पुगेर रोकिएको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक २८ सय १२ अंकमा रोकिएको थियो । यो साताको पहिलो कारोबार दिन असोज ४ गते परिसूचकमा ११४ अंकको गिरावट आएको थियो ।त्यसपछि असोज ५ गते १३ अंक र ६ गते १०४ अंकको बृद्धि भएको थियो । यस्तै, साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार पनि नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले बढेपछि साताभर ७ अंकको सुधार आउँदै
साताको सेयर बजारः ४२ अर्बको कारोबार
काठमाडौँ – धितोपत्र बजारमा यस साता सेयर कारोबारमा असाध्यै बढी उतारचढाव देखियो। कहिले असाध्यै उच्च अंकले नेप्सेमा गिरावट देखियो भने कुनै दिन नेप्सेले उच्च अंकको वृद्धि देखियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लगाएको सीमाका कारण बजारमा उतारचढाव देखिएको तर्क गर्नेहरू पनि भेटिए। यस साता पाँच दिन नै सेयर कारोबार भयो। नेप्सेमा उतारचढाव देखिँदा कारोबार […]
Desh Sanchar3महिना पहिले
यो साता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा परिसूचकसँगै कारोबार रकममा गिरावट आएको छ । ५ दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक साताभर ५१ अंकले घटेको हो । उक्त अंकको गिरावटसँगै नेप्से परिसूचक २९ सय २६ अंकबाट घटेर २८ सय ७५ अंकमा आइपुगेको छ ।साताभर ५ दिन कारोबार हुँदा चार कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आउँदा उच्च अंकको गिरावट आएको हो । सातामा सोमबार एकैदिन १६१ अंकले परिसूचक बढ्नुबाहेक अन्य कुनै दिन बढेन । यस्तै, साताको पहिलो कारोबार एकै पटक १०८ अंकको गिरावट आएको थियो ।साताको ५ कारोबार दिनमा ४२ अर्ब २५
साताको सेयर बजारः ४२ अर्ब ५१ करोडको कारोबार
काठमाडौँ – नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमा धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ। बजार पुँजीकरणमा समेत उत्साहजनक अवस्था सिर्जना भएको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि लगानीकर्तामा विश्वाससमेत बढेको पाइएको छ। नेप्से परिसूचकसमेत तीन हजार विन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै शीर्ष स्थान हो। बजारमा झण्डै एक महिनाजस्तो ‘करेक्सन’ […]
कस्तो रह्यो यो साताको सेयर बजार ?
साउन लागेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम सहज हुदै गएपछि सेयर बजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखियो । यो साता सेयर बजारले ३ हजार विन्दुको मनोवैज्ञानिक अंक पार गर्न सफल पनि भयो । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार सेयर बजार ३००४.४१ विन्दुमा आइपुगेर बन्द भएको छ । यसअघि नेप्से सूचक जेठ ३१ गते ३०२५.८३ विन्दुसम्म पु...
२६ असार, काठमाडौं । साउनको तेस्रो साता सेयर बजार समग्रमा घटेर बन्द भयो । सातामा भएका पाँच कारोबार मध्ये अन्तिम दिन बिहीबार दोहोरो अंकले बजार बढेर बन्द भएको थियो । बिहीबार बजार बढे पनि बाँकी चार दिन घटेका कारण सतामा नेप्से परिसूचक २७ दशमलव २४ अंकले घटेको छ । अघिल्लो २ हजार ८ सय ५२ […]
साताको सेयर बजार : ४८ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं। यो साता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा ४८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। आइतबारदेखि बिहीबारसम्ममा उक्त रकम बराबरको सेयर कारोबार भएको नेप्सेले बताएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी आइतबार ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। यसैगरी अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार जम्मा ६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको कोरोबार भएको नेप्सेले बताएको छ।
साताको सेयर बजार : निराश बने बैंकिङ समूहका लगानीकर्ता
९ माघ, काठमाडौं । माघ महिनाको पहिलो साता समग्रमा सेयर बजार उकालो लागेको छ । सेयर कारोबार सार्वजनिक बिदा बाहेक सातामा ५ दिन खुला रहन्छ । माघको पहिलो साता पाँचै दिन कारोबार भएको छ । पाँच दिनको कारोबारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ५३ अंकले वृद्धि भएको छ । गत आइतबार नेप्से परिसूचक २ हजार […]